China DAM3-160 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Remagetsi fekitori uye vagadziri | DaDa
Ongororo yeDAM3-160 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Remuchina
Iyo yakatemwa kuputira voltage yeiyo Dada DAM3-160 yakaumbwa kesi redunhu breaker inogona kusvika kusvika ku100V. Midziyo yemagetsi iyi inokodzera magetsi ekuparadzira maseketi ine inochinjika yazvino ye50-60Hz, yakatemwa magetsi ekushandisa inosvika ku750V, uye yakayerwa iriko kushanda kubva pa10A kusvika 100A. Iyo wedunhu breaker inoita basa rakakosha mukugovera simba uye kuchengetedza iyo yedunhu nemagetsi zvishandiso kubva pakuwandisa, maseketi mapfupi, uye nekusavhiringidza kwekutadza kukuvara. Iyo inogona zvakare kushandiswa mumagetsi emagetsi ekushomeka kwekutanga uye kuwandisa kudzivirirwa pamwe nekudzivirirwa kubva kukufupi kutenderera uye kusagadzikana kwemamiriro ezvinhu.
Inofananidzwa neiyo DAM1 yakateedzana, iyo DAM3 nhevedzano yakagadzirirwa vhoriyamu diki, yakakwira kutyora chinzvimbo, ichipa yekuwedzera simba kuchengetedza.
Magetsi Parameter eDAM3-160 Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora
Rated parizvino yefreyimu saizi Inm [A]
Rated ikozvino [A]
Rated uchishandisa voltage
Inoratidzirwa kushushikana kutsungirira voltage Uimp [KV]
Rated kuputira voltage Ui [V]
Bvunzo yemagetsi kumaindasitiri kuwanda kwe1 min [V]
Rated yekupedzisira pfupi-redunhu kutyora chinzvimbo Icu [KA]
(DC) 250V-2 Matanda akateedzana
(DC) 500V-2 Matanda akateedzana
(DC) 750V-4 Matanda akateedzana
(DC) 1000V-4 Matanda akateedzana
Rated sevhisi pfupi-redunhu kutyora kugona, Ics [KA]
chikamu chekushandisa (EN 60947-2)
Panyama Parameter yeDAM3-160 Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinopwanya
Basic saizi-yakatarwa vhezheni
Yakagadziriswa 3/4 Poies [Kg]
Dhonza 3/4 Poies [Kg]
Iyo DAM3-160molded kesi redunhu mudariki inongoerekana yadimbura iyo yazvino kana iyo yazvino ichidarika iyo yekuburitsa marongero. Iyo yakaumbwa kesi inoreva kune epurasitiki insulator inoshandiswa senge furemu yechishandiso kuvharidzira conductor uye nesimbi grounding componen
Ongorora: Chigadzirwa chigadzirwa chakabatanidzwa.
Zvakanakira Kubatsirwa Kwako
Compact (Kuchengetedza nzvimbo)
Isingakundiki kana zvasvika pakuchengetedza nzvimbo: Mune iwo maseketi anotsemuka, iyo DAM3 yakatetepa mukirasi yavo uye nokudaro inogona kushandisa yakakosha nzvimbo yekuparadzira zvakanyanya, zvisinei kuti anoshandiswa simba rekuparadzira simba kana sedziviriro yesimba rinouya muzvivakwa zvekugara kana zvinoshanda.
Iyo 160 saizi saizi inofananidzwa neimwe mhando, idiki asi ine simba.
Pasi pemusoro unoti "Matanho ekuderedza njodzi kana paitika kutadza",
IEC 60204-1 Kuchengetedzwa kweMishini-Magetsi Midziyo yeMachini inosanganisira kurudziro inotevera:
"-kushandisa switching zvishandiso zvine maitiro akanaka (kana akananga) ekuvhura mashandiro."
Iyo njodzi yekubata mitezo mhenyu yakaderedzwa nekugadzirwa.Izvi zvinhu zvinoderedza njodzi yekubata zvikamu zvehupenyu:
Iko hakuna kwakafumurwa simbi screws pamberi pechiso
IP20 kudzivirirwa pazviteshi
IP30 kudzivirirwa pakutendeuka
Kana iyo toggle yakaputswa netsaona kana kushandiswa zvisizvo, hapana chikamu chehupenyu chinofumurwa
Hapana mitezo mhenyu inoburitswa painokodzera zvishongedzo
Kutaridzika Kwekuona (Chiratidziro hwindo)
Makara mavara anoratidza iyo ON kana OFF chinzvimbo. Zviratidziro zvakafukidzwa zvizere kana mabhureki achifamba, uye dema ndiro chete rinoonekwa ruvara.
Kunze (O) On (I) Kutsemurwa
Zvekutsanya kwekutanga pane zvinopisa uye zvemagineti zvinokanganisa kukosha zvakatogadziriswa.
Iyo DAM3 nhepfenyuro iri nyore kwazvo kubata uye inobvumira kumisikidza nekukurumidza kana uchiita yako mabasa.
Kukwira pane 35mm DIN Rail (patent yakachengetedzwa)
Inosungirirwa nyore nyore kumashure kwe2 / 3 pole DAM3-160 modhi yekubvumira kukwirisa clip kweMCCB kune 35mm DIN njanji.
Izvo zvinoita kuti vakwanise kukwirisa padivi modular zvishandiso mumabhodhi ekuparadzira.
Distribution bhokisi Distribution box Distribution box
Mukuteedzana neIEC / EN 60947-2 zviyero uye kusvibiswa degree III (IEC / EN 60947) isu hatisi kungoona izvo zvinhu chete asiwo hunhu husingaenzanisike hweDAM3 redunhu breaker akateedzana. Uye neyedu DAM3 yakateedzana, isu tinoratidza zvakare kufunga nezve nharaunda sezvo aya mabhatiri anotenderera anoenderana nemirau yeRoHS uye inogona kudzokororwa kusvika pamwero mukuru. Uye chekupedzisira asi chisiri chidiki - chipfeko chakashongedzwa cheDAM3 dzakateerana mune yakasarudzika CDADA dhizaini inoita kuti zvigadzirwa izvi zvioneke kwete chete kubva kune tekinoroji asiwo kubva kune yekushongedza maonero ekuona.
Diki uye Simba
Iyo DAM3-160 inopa chengetedzo ine yakatarwa magetsi kusvika ku160 A uye 36 kA kutyora chinzvimbo, kunyangwe iine huremu hwakareruka uye hupamhi hupamhi hwe25 mm chete padanda. Nyeredzi iri mukati memhuri yedunhu remudunhu, inowanikwa seye 2, 3 kana 4-pole mudziyo. Zvekutanga nekukurumidza zvine kupisa uye kwemagineti ekugumburisa zvimiro zvakatogadzikiswa neCDADA. Uye ine hupenyu hwakareba zvakanyanya hunosvika zviuru gumi zvemagetsi anoshanda macircuit. Uye zvakare, nekuda kwekuvhara kwayo kwekupedzisira, iyo DAM3 inoratidzira IP 10 degree rekudzivirira.
Zvakawanda zvekusarudza sarudzo
Kumusoro-pasi kana yakatwasuka? Zviri kwauri kuti iwe unoshuvira sei kukwirisa iyo DAM3 Asi zvisinei nekukwiridzira chinzvimbo uye nedivi raunosarudza kuti uwane magetsi, inogara ichipa izere yekuchengetedza basa.
Kugadzirisa Cable: Cable lug uye bhokisi chinongedzo
Iyo yakavhenekerwa tambo lug ine M8 screws uye iyo bhokisi terminal tekinoroji yekukurumidza uye nyore kumisikidza: ese ari maviri akaverengerwa mune yakajairwa mhando yezvigadzirwa.
Mhinduro Dzakagadzirwa Kuyera
Kuremara kure, kuratidza mamiriro ekuchinja kana pasi-magetsi kuburitsa kuitira kuchengetedzwa kwakakodzera kunyorera zvese izvi zviri nyore kubata kune iyo DAM3.Thanks kune yakazara renji yezvishongedzo, iyo DAM3 haingori chete mutambo wakaringana weyakajairika mafomu, asi zvakare mhinduro kwayo kune yega yekubata zvinodiwa.
Pakukumbira iyo DAM3 inowanikwawo nemubato we rotary (wekumisikidza yakananga kana kubatanidza musuwo).
Hunhu / Zvimiro
Rated yazvino 16A upto160A
Kuputsa kugona: 12, 18, 25, 36 kA
Kugadziriswa kwetambo: Cable lug M8 kana Bhokisi Terminal
Matanda anowanikwa: 2pole, 3pole, 4poles
3-Chinzvimbo lever: Kunze-Rwendo-ON
Kugovera kweMagetsi: Mutsetse kana Mutoro-Kurutivi
Iyo huru yekubatana yeDAM3-160 yakaumbwa kesi redunhu breaker ndeyemanyorerwo ekugadzirisa kana emagetsi kuvhara. Mushure mekutaurirana kukuru kwavharwa, iyo yemahara yekuburitsa mashini inokiya iyo huru yekutaurirana munzvimbo yekuvhara. Iyo overcurrent rwendo coil uye iyo yekupisa rwendo element yakabatana mune akateedzana neiyo huru dunhu. Iyo yekusavhiringidza rwendo coil uye magetsi magetsi zvakabatana zvakafanana.
Kukura kweDAM3-160 yakaumbwa kesi redunhu mudariki
Zvese zvigadzirwa zvinopihwa kubva mune ino katalog zvinotakura garandi kupokana nehurema hwezvinhu uye hunyanzvi kwenguva yemwedzi gumi nemaviri kubva pazuva rekutenga seyakajairwa.
CDADA ine ISO 9001 kubvumidzwa kwekugadzira, kutengesa uye kugovera zvese zvigadzirwa zvinowanikwa mune ino katarogu.
Tsigiro Yehunyanzvi ndeye Mahara
Isu tinopa yemahara technical technical uye software yekushandisa kune vese vatengi. Izvi zvinogona kubva pakusarudza chigadzirwa chechishandiso chisina kujairika kuburikidza nekuita chidzidzo chekudzivirira.
Pashure: DAM1 Series Thermal Overload Mashandiro Akaumbwa Nyaya Yakagadzirwa Nedunhu (Yakagadziriswa mhando)
Zvadaro: DAM3-250 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora
din njanji mccb
diki saizi mccb